Amai Sheffra Dzamara, mudzimai waVaItai Dzamara kuruboshwe.
Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichitiwo hurumende inofanira kuumba komiti inoongororara nyaya yekutsakatika kwemurwiri wekodzero dzevanhu VaItai Dzamara makore matatu apfuura kana kuti public inquest.
Sangano iri ratiwo veZimbabwe Human Rights Commission nematare vanofanira kubatsira mukutsvagwa kwaDzamara vachipotawo vachisuma dare reparamende nezvinenge zvichiitika.
Mapurisa akazivisa nemusi weMuvhuro kuti ave kutanga kutsvaga VaDzamara. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vange vari mumusangano nekudaro vange vasingakwanise kutaura.
Asi mukoma waVaDzamara, Doctor Patson Dzamara vanoti naivo vari kushamisika nezvekataurwa nemapurisa asi vachiti vanoda kuona muni’n'ina wavo kunyangwe ari mupenyu kana akapondwa.